Maseru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emagetsi epaneru
Takatora chikamu muAlibaba Core Merchant Training Camp musvondo rapfuura
Amso Solar timu yechidiki, uye vechidiki venguva ino havangodi muhoro chete asiwo nharaunda kwavanogona kusimukira. Amso Solar yagara iri kambani inotarisana nekudzidziswa kwevashandi, uye isu takagadzirira kubatsira mushandi wese kuwana kuzvisimudzira. Tinotenda kuti yemakambani trai ...
Masangano ezuva akasika akaisa rekodhi nyowani, iine shanduko yekuita 18.07%
Tekinoroji yazvino yeOPV (Organic Solar Cell) tekinoroji yakabatana neboka raVaLiu Feng kubva kuShanghai Jiaotong University neBeijing University yeAeronautics neAstronautics yakagadziridzwa kusvika pa18.2% uye nekushandurwa kwekuita kuve 18.07%, ichiisa rekodhi nyowani. ...
Tekinoroji nyowani mu photovoltaic indasitiri-inoparadzanisa maseru ezuva
Transparent maseru ezuva haazi matsva pfungwa, asi nekuda kwematambudziko epanyama eiyo semiconductor dura, iyi pfungwa yave yakaoma kududzira mukuita. Nekudaro, nguva pfupi yadarika, vesaenzi kuIncheon National University muSouth Korea vakagadzira anoshanda uye akajeka ezuva cel ...
2020 SNEC Zvakakosha
Iyo 14th SNEC yaibata muna 8th-10th Nyamavhuvhu 2020 muShanghai. Kunyangwe hazvo zvainonoka nedenda, vanhu vachiri kuratidza kushinga kwakasimba nezvechiitiko pamwe neindasitiri yezuva. Mukupfupisa, takaona nzira nyowani nyowani mumagetsi ezuva anotarisa pane hukuru hukuru hwekristalline, yakakwira-density, ...